I-QEMU 6.1 iza nokubethela kwe-Hardware, ukusekelwa kwamabhodi amaningi nokuningi | Kusuka kuLinux
Ukukhishwa kwe- inguqulo entsha ye I-QEMU 6.1 lapho kwenziwa khona izinguquko ezingaphezu kuka-3000 ngabathuthukisi abangama-221, lapho i- ukuthuthukiswa kokulawula, kanye nokwesekwa kwamabhodi amaningi okuma kuwo i-Cortex-M3, ukuthuthuka kwe-PowerPC, ukusekelwa kokubethela kwehadiwe, phakathi kwezinye izinguquko.
Kulabo abangayazi i-QEMU, kufanele bazi ukuthi yi-software leyo ikuvumela ukuthi usebenze uhlelo oluhlanganisiwe lwesikhulumi sehadiwe kusistimu enokwakhiwa okuhluke ngokupheleleIsibonelo, ukusebenzisa uhlelo lwe-ARM kwi-x86 PC ehambisanayo.
Kumodi ye-virtualization ku-QEMU, ukusebenza kwekhodi ekusetshenzisweni kwe-sandbox kuseduze nohlelo lwehardware ngenxa yokwenziwa okuqondile kwemiyalo ku-CPU nokusetshenziswa kwe-Xen hypervisor noma imodyuli ye-KVM.
Izindaba eziyinhloko ze-QEMU 6.1
Kule nguqulo entsha ye-QEMU 6.1, singathola ukuthi ngokuzenzakalela, i-plugin isekela i-TCG code generator (Tiny Code Generator) yakudala inikwe amandla nokuthi i-execlog entsha (i-log log yokwenza) nokwakhiwa kwe-cache (ukulingiswa kokuziphatha kwe-L1 cache ku-CPU) kungeziwe.
Okunye okusha okuvelele kule nguqulo entsha ukuthi kungezwe ukuxhaswa kwamabhodi ngokususelwa kuma-Aspeed chips (rainier-bmc, quanta-q7l1), npcm7xx (quanta-gbs-bmc) kanye neCortex-M3 (stm32vldiscovery) ku-emulator ye-ARM.
Ngenkathi kusengxenyeni ye- ukusekelwa kwamamodeli amasha we-Intel CPU ku-x86 emulator Kungeziwe I-Skylake-Client-v4, Skylake-Server-v5, Cascadelake-Server-v5, Cooperlake-v2, Icelake-Client-v3, Icelake-Server-v5, Denverton-v3, Snowridge - v3, Dhyana-v2 esebenzisa umyalo weXSAVES.
Ngenkathi uku-GUI, el ukusekela ukuqinisekiswa kwephasiwedi lapho umthetho olandelwayo usetshenziswa I-VNC manje inikwe amandla kuphela lapho lakhiwa nge-crypto backend yangaphandle (amantongomane, i-libgcrypt, noma imbabazane).
Futhi singathola ukuthi ngiyazi kungezwe ukusekelwa kokubethela kwehadiwe nezinjini ze-hashing ezinikezwe kuma-Aspeed chips, nalokhu kanye nokuxhaswa kokulingisa imiyalo ye-SVE2 (kufaka phakathi i-bfloat16), ama-opharetha wokuphindaphindeka kwe-matrix, kanye nemiyalo yokugudluza ama-buffers wokuhumusha okuhlangene (TLBs).
I-emulator yokwakha I-PowerPC «izinsimbi» ngemishini elingisiwes ingeze ukusekelwa kokuthola ukwehluleka okushisayo kwe-plug ezindaweni ezintsha zezivakashi, ikhuphule umkhawulo we-CPU futhi yaqalisa ukulingiswa kweminye imiyalo ethize kuma-processor we-POWER10.
Ngaphezu kwalokho, kushiwo ukuthi njengoba umshayeli wokubethela kuqala, ama-gnutls asetshenziswa, ephambi kwabanye abalawuli maqondana nokusebenza, ngenkathi isilawuli esisekwe e-en okuzenzakalelayo libgcrypt enikelwe ngenhla idluliselwe enkethweni futhi umshayeli osuselwa enettle ushiywe njengenye indlela yokusetshenziswa lapho kungekho i-GnuTLS neLibgcrypt.
Kwezinye izinguquko okugqamile kule nguqulo entsha ye-QEMU 6.1:
Ukusekelwa kwama-multiplexers we-PMBus ne-I2C (pca9546, pca9548) kungezwe ku-emulator ye-I2C.
I-emulator ye-RISC-V isekela ipulatifomu ye-OpenTitan kanye ne-virtual GPU virtio-vga (ngokususelwa ku-virgl).
I-s390 emulator ingeza ukusekelwa kwama-CPU wesizukulwane se-16 nezandiso zevector.
Kungezwe ukusekelwa kwamabhodi asuselwa ku-Genesi / bPlan Pegasos II chips (pegasos2).
I-Q35 (ICH9) chipset emulator isekela ukuxhuma okushisayo kwamadivayisi we-PCI. Ukulingiswa okuthuthukisiwe kwezandiso zokwenza izinto kuhlinzekwe kuma-processor we-AMD.
Ukusekelwa kokuhlola kokucaciswa kwe-ePMP
Ukusekelwa kokuqala kwesandiso se-Bit Manip sokuhlola
Kungezwe inketho yebhasi-lock-ratelimit yokukhawulela ukuqina kwesikhiya sebhasi ngohlelo lwezivakashi.
Kungezwe umyalo we- "blockdev-reopen" ku-QMP (QEMU Machine Protocol) ukushintsha ukucushwa kwedivayisi eseyakhiwe kakade.
Ukusekelwa kungezwe ukuze kusetshenziswe njenge-accelerator ye-NVvisM hypervisor eyenziwe iphrojekthi yeNetBSD.
Okokugcina uma unentshisekelo yokwazi kabanzi ngakho wezinguquko nezintsha ezivezwe kule nguqulo entsha ye-QEMU 6.1, ungabheka imininingwane nokuningi ku isixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-QEMU 6.1 iza nokubethela kwehardware, ukusekelwa kwamabhodi amaningi nokuningi